Thursday January 07, 2016 - 07:28:39 in Wararka by Super Admin
Iyadoo magaalada Muqdisho ay si dardar leh uga soconayaan weerarada kala duwan ee ka dhanka ah ciidamada shisheeye iyo DF, ayaa waxaa inoo suura gashay inaan wareysano waaliga wilaayada islaamiga ah ee ah ee Banaadir Sh/Cali Maxamad Xuseyn (Sh/Cali J
Iyadoo magaalada Muqdisho ay si dardar leh uga soconayaan weerarada kala duwan ee ka dhanka ah ciidamada shisheeye iyo DF, ayaa waxaa inoo suura gashay inaan wareysano waaliga wilaayada islaamiga ah ee ah ee Banaadir Sh/Cali Maxamad Xuseyn (Sh/Cali Jbal) isagoo sharaxad inaga siiyay sida ay wax u socdaan iyo halka ay wax marayaan.
Sheekhu wuxuu ugu horeyn ka dhawaajiyay in ay si wanaagsan u socoto istaraatiijiyaddii dagaal ee ay ugu talagaleen iney kula dagaalamaan shisheeyaha iyo dowladda, isagoo sheegay in hadda la marayo xilli ay shisheeyaha iyo madaxda dowladdu ku dhuunteen xeryo iyo xarumo la waardiyeeyo, sidaa darteedna ay dharbaaxooyinka ugu badan ku dhacayaan dadka gacmaha u ah ee dibadda usoo baxa.
Wuxuu sheegay in ujeedada laga leeyahay ay tahay in ummada laga dul qaado shisheeyaha soo duulay ee doonaya inuu diin ahaan iyo dhaqan ahaan u beddelo islamarkaana hantidooda boobo. Sheekhu wuxuu intaa raaciyay iney hawl gallo sii socon doonaan illaa inta laga gaarayo hadafka dhanka ee ah iney kor noqoto kalimadda Allaah.
Sidoo kale waaliga ayaa sheegay in wilaayadu ay qabato hawlo ka baxsan kuwa milatariga oo isugu jira wacyi galin iyo wax tar, wuxuuna ku baaqay in loo istaago sidii shisheeyaha la isaga dul qaadi lahaa.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa aad ugu soo badanaya weerarada ka dhanka ah dowladda iyo shisheeyaha, waxaa si joogto ah loo beegsadaa gaadiidka ciidamada shisheeye kolka ay wadooyinka magaalada ku socdaalayaan kuwasoo inta badan lala beegsado qraxyo miinooyin ah, halka sidoo kale si toos ah iyo si dadban loo ugaarsado mas’uuliyiinta iyo saraakiisha dowladda, taasoo uu sii dheeryahay dagaalka tooska ah ee lagu qaado xeryaha ciidamada dowladda iyo kuwa shisheeye.
Halkan ka dhageyso Wareysiga Sheekh Cali Jabal MP3